Fikarohana momba ny firaisana Raharaha Reincarnation an'i Hazel Scott | Beyoncé sy ny vadiny Adam Clayton Powell, Jr | Jay-Z - Fikarohana Reincarnation
Raharaha Reincarnation an'i Hazel Scott | Beyoncé sy ny vadiny Adam Clayton Powell, Jr | Jay-Z
Ny fiainan'i Hazel Scott
Indray andro, tao amin'ny Internet aho, nianjera tamin'ny sarin'ny Hazel Scott. Nanamarika fampitoviana kely tsy mitovy amin'ny an'i Scott sy i Beyoncé. Rehefa namaky ny tantaram-piainan'i Scott aho, nahatsikaritra fa nizara talenta maro niaraka tamin'i Beyoncé izy. Taorian'izay dia tao anatin'ny fotoam-pivoriana niarahana amin'izao tontolo izao Kevin Ryerson, Ahtun Re, mpitarika ara-panahy nampitaina tamin'i Kevin izay nampiseho ny fahaizana mametraka ny lalao taloha taloha amin'ny maha-marim-pototra azy, nanamafy fa i Beyoncé no reincarnation Scott.
Hazel Dorothy Scott dia teraka tamin'ny 11 Jona 1920 tany Trinidad, nosy Karaiba iray avaratry Venezoela. Mpandala mozika izy ary hampivelatra ny talentany dia nentin'ny renin'i Hazel tany New York City izy tamin'ny faha-4 taonany. Nanomboka tamin'ny faha-8 taonany dia nahazo vatsim-pianarana i Hazel hianatra mozika ao amin'ny Julliard School malaza.
Nandritra ny asany amin'ny maha mpihira azy, dia tonga mpankafy mozika fanta-daza sy ankalazaina ary manankarena tamin'ny androny i Hazel. Vehivavy voalohany loko izy manana fampisehoana fahitalavitra manokana any Etazonia.
Nanambady i Hazel Adam Clayton Powell, Jr, minisitra Batista tao Harlem, New York City, izay lasa Kongresy amerikana ihany koa.
Tamin'ny taona 61, maty tamin'ny homamiadana i Hazel Scott tamin'ny Oktobra 2, 1981, tao Manhattan.
Hazel Scott Reincarnates ho Beyoncé
Beyoncé Giselle Knowles-Carter dia teraka tamin'ny Septambra 4, 1981, iray volana teo ho eo talohan'ny nahafatesan'i Hazel Scott. Raha izany dia maneho tranga iray ny niparitaka, tranga fananganana reincarnation izay misy fanahy mivelona vatan'olona roa indray mandeha. Ian Stevenson, MD, avy amin'ny Oniversiten'i Virginia Nantsoina hoe “tranga misy daty mihetsiketsika” ireo tranga ireo, satria tafahoatra ny andro.
Beyoncé dia mpihira mpamokatra sy mpitendry zavakanto ihany koa. Namidy an-tsoratra 100 tapitrisa izy ary nahazo loka 23 Grammy Award.
Jay-Z amin'ny maha-teraka ao amin'ny vatana vaovao ny vadin'i Hazel Scott, Adam Clayton Powell, Jr
Ny vadin'i Beyonce dia mpamono olona Jay-Z, izay tena anarany dia Shawn Corey Carter. Matetika ny mpivady dia miara-misalahy indray, ary ara-dalàna ny manontany tena raha toa ka Jay-Z no fananganana indray ny vadin'i Hazel Scott, Adam Clayton Powell, Jr. samy hafa.
Powell dia minisitry ny Batista tsy misy ambadiky ny mozika azoko jerena amin'ny alàlan'ny loharanom-baovao an-tserasera, raha i Jay-Z dia mpamorona, mpitendry mozika ary mpamokatra mozika malaza eran-tany. Tetsy ankilany, Powell dia pasitera batista tao Harlem, New York City. Noho izany, ny andraikiny amin'ny maha-minisitry ny fiangonana azy dia tokony ho nisy fiangarana mozika sy fihira be.
Ahtun Re dia nanamafy fa i Jay-Z dia reinkarnation ny vadin'i Hazel Scott, Adam Clayton Powell. Rehefa nanamarika ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny talenta sy ny fikarakarana an'i Powell sy i Jay-Z i Ahtun Re dia nanamarika fa ny rap dia mikasika ny gadona teny lazaina ary ny mpitory Batista dia fantatra ihany koa noho izany fahaiza-manao izany.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitoviana manaitra eo amin'i Hazel Scott sy i Beyoncé. Misy fitoviana ihany koa amin'ny endri-tava eo amin'i Adam Clayton Powell, Jr sy Jay-Z.
Talenta sy fahaiza-manao taloha: Mpanao mozika mozika sy mpihira mbola kely i Hazel Scott, toa an'i Beyoncé. Adam Clayton Powell dia minisitry ny fanta-daza, izay nampiasa ny teny fitenenana tamin'ny fampihetseham-batana, mitovy amin'ilay mpanao rapper na Jay-Z.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Misy porofo marobe fa ny fanahy dia mikasa ny fotoana hiarahana indray amin'ireo olon-tiana taloha.
The Twin Study izay notarihan'i Ian Stevenson, MD avy amin'ny University of Virginia dia maneho an'io hevitra io amin'ny fomba feno.
Hazel Scott dia nanambady an'i Adam Clayton Powell, izay nipoitra indray tamin'ny fiainana Beyonce tao amin'ny persona an'i Jay-Z.
Ny fihenam-bidy: Teraka volana iray talohan'ny nahafatesan'i Hazel Scott i Beyoncé. Raha ny fahitana azy io dia tranga amin'ny fahatapahan-jaza misaraka, izay misy olona miaina mihoatra ny iray olombelona amin'ny fotoana iray. Ian Stevenson, MD avy ao amin'ny Oniversite any Virginia dia niantso ireo “tranga misy amin'ny daty miomerika” ireo, satria tafahoatra ny fotoana.